manontany anao ny tenimiafiko iCloud alohan'ny hangalaranao ny phishing hanokatra iCloud | Vaovao IPhone
Angatahina aminao ny tenimiafiko iCloud alohan'ny hangalarana na Phishing amin'ireo safidy ampiasaina hamaha iCloud
Manana heloka izy ireo ankoatry ny fandrobana anao dia angatahiny aminao ny teny miafinao afaka mamoha ny iPhone ... Eny, toa mitranga izany any amin'ny tanàna sasany any Etazonia izay tsy afa-po intsony amin'ny fanomezana anao ny tahotra amin'ny fiainanao izay mitaky anao hanome azy ireo teny miafina ihany koa hahafahany amidio indray ny iPhone-nao.
Soa ihany fa tsy dia misy loatra izany ary ny ankamaroan'ny halatra dia amin'ny alàlan'ny ady. nefa tsy mila "miady" amin'ilay meloka, Amin'ny farany, ireo fitaovana tsy misy teny miafina dia miafara amin'ny famoahana taratasy na tsara indrindra hamidy indray ho an'ny ampahany. Marina fa ny fiarovana an'i Apple dia mampihena ny fangalaran'ireto fitaovana ireto, saingy mamy foana ny mpangalatra mangalatra ny iPhone ka tokony hitandrina ianao.
Ao amin'ny Motherboard dia hitanao fa ny sasany amin'ireo safidy ampiasaina hamaha iPhones halatra, very na tsy fitandremana tsotra izao dia toa miovaova. Tsy isalasalana fa mampiahiahy fa ny olona tonga hangalatra ny iPhone dia manery anao hanome ny teny miafin'ny iCloud amin'ny alàlan'ny fandrahonana na inona na inona karazana ka tsy afaka hidinao ilay fitaovana, fa mitranga izany indraindray. Fa ny zavatra mahazatra indrindra amin'ny tranga rehetra dia rehefa voaroba ianao ny hackers dia ampiasaina handefasana mailaka phishing ary alao ny teny miafina.
Misy fomba vitsivitsy hamafana kaonty iCloud arak'ity tranonkala ity ary ny marina dia izany tsy misy mora tanterahina ireo ka amin'ny farany dia maro ny mpanao heloka bevava mahazatra no misafidy ny hivarotra ilay fitaovana mihidy amin'ny alàlan'ny famindrana ny olana amin'ilay olona mividy azy. Toy ny fitsipika ankapobeny hahazoana ny lakilen'ny kaonty dia matetika ampiasaina ny phishing, afaka manandrana mamitaka ny mpitantana ny Apple Store izy ireo hamaha ilay fitaovana (tsy misy fahombiazana kely amin'ny ankamaroan'ny tranga) na afaka manova ny takelaky ny fitaovana ho mandahatra fandaharana ary diovy, na dia lafo kokoa aza ity fomba ity ary sarotra ny manatanteraka azy.
Izany no antony tsy maintsy hitandremantsika manokana izay tena mora tohina amintsika ary izany dia mianjera mivantana amin'ny fangalarana famantarana amin'ny alàlan'ny e-mail, ilay antsoina hoe phishing. Mila mitandrina tsara ianao satria mihamaro ny mailaka amin'ity karazana ity tonga any amin'ny boaty fandefasana azy ary tena mora ny mamantatra fotsiny amin'ny alàlan'ny fijerena ny adiresy mailaka an'ny mpandefa, eny fa na dia amin'ny vola anontaniany aminay ny fandoavana zavatra mbola tsy novidianay toy ny habakabaka amin'ny rahona, ny App na ny mitovy aminy, amin'ny tsipelina ny mailaka sy ny toy izany. Tokony hitandrina an'io isika satria mora ny mianjera raha tsy mamaky tsara ny atin'ny mailaka ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » iCloud » Angatahina aminao ny tenimiafiko iCloud alohan'ny hangalarana na Phishing amin'ireo safidy ampiasaina hamaha iCloud
Apple dia namoaka horonantsary mozika mahafinaritra telo miaraka amin'i Memojis